ရခိုင်ဘုရင် အာနန္ဒ စန္ဒြမင်း၏ ကျောက်စာကို ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်း အမွေအနှစ်အဖြစ် ယူနက်စကိုသို့ ယခုလအတ?? - Yangon Media Group
မြောက်ဦး၊ မေ ၂၆
အေဒီ ၈ ရာစုတွင် ရေးထိုးထားသည့် ရခိုင်ဘုရင် အာနန္ဒစန္ဒြမင်း၏ကျောက်စာကို ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းအမွေအနှစ်အဖြစ် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မေ ၃၁ ရက်တွင် ယူနက်စကိုသို့ အပြီးသတ် တင်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသား ပြတိုက်ဦးစီးဌာနမှသိရသည်။ ညအဆိုပါ ကျောက်စာကို ကမ္ဘာ့မှတ် တမ်းအမွေအနှစ်အဖြစ်တင်သွင်းရန် အဆိုပြုလွှာအချောကို မေလကုန်အပြီး တင်ရခြင်းဖြစ်ပြီး အမွေအနှစ်စာရင်း ဝင်၊ မဝင်လာမည့်နှစ်တွင် သိရမည် ဖြစ်သည်။
”အာနန္ဒစန္ဒြကျောက်စာကို ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းအမွေအနှစ်အဖြစ် တင်သွင်းသွားဖို့ရှိပါတယ်။ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မေ ၃၁ ရက်မှာ အပြီးတင်ရမယ်။ တင်ရမယ့် အဆိုပြုလွှာအချောကတော့ ပြီးသ လောက်ရှိနေပါပြီ။ အမွေအနှစ် စာရင်းဝင်၊ မဝင် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်မှာ သိရမှာဖြစ် ပါတယ်”ဟု ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန် ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဦးလွင်က မေ ၂၆ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် အာနန္ဒစန္ဒြ ကျောက်စာကို ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းအမွေအနှစ် စာရင်းသွင်းရန် သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြတိုက်အ တိုင်ပင်ခံပညာရှင် ရခိုင်ရှေးဟောင်း သုတေသနပညာရှင် ဒေါ်နုမြဇံနှင့် ရှေး ဟောင်းသုတေသနမှ ပညာရှင်များက ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၇ခုနှစ်တွင် ဘုရင့် နောင် ခေါင်းလောင်းစာကို တင်သွင်း ခဲ့သောကြောင့် ယခု ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်တင်သွင်းရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ကျောက်စာ၏အမည်ကို အာနန္ဒ စန္ဒြမင်းကြီးအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အာနန္ဒစန္ဒြကျောက်စာဟု အများခေါ် ဝေါ်သိရှိကြကြောင်း သိရသည်။ ”ဒီကျောက်စာကို အေဒီ ၈ ရာစု ဝေသာလီခေတ်မှာ အာနန္ဒစန္ဒြမင်းကြီး လက်ထက်မှာ ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်နုမြဇံက ပြောခဲ့သည်။ အာနန္ဒစန္ဒြကျောက်စာတိုင်သည် အမြင့် ၃ ဒသမ ၃ မီတာ (ကိုးပေခုနစ် လက်မ)နှင့် အကျယ် ဝ ဒသမ၇ မီတာ (နှစ်ပေ လေးလက်မ)ရှိပြီး မျက်နှာလေး ဘက်အနက် အရှေ့၊ အနောက်၊ မြောက် ဘက် သုံးမျက်နှာတွင် စာသားများရေး ထိုးထားကြောင်းနှင့် ဂါထာပေါင်း ၆၅ခု (အပိုဒ်ရေ ၆၅ခု)ပါရှိပြီး ပထမ မင်းဆက်ကို ဂါထာ ၁၆ခု၊ ဒုတိယ မင်းဆက်ကို ဂါထာ ၁၄ခု၊ တတိယ မင်းဆက်ကို ဂါထာ ၁၃ခုဖြင့် ဖော်ပြ ထားကာ ဂါထာတော် ၄၄မှ စတင်၍ အာနန္ဒစန္ဒြမင်းကြီးအကြောင်းကို ဂါ ထာပေါင်း ၂ဝဖြင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြ ထားကြောင်း ရခိုင်စာရေးဆရာ ရွှေဇံ၏ ‘သမိုင်းခေတ် ကာလပိုင်းခြားမှု မြေကြီးက သက်သေတည်သရွေ့’ စာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ဘုရင် အာနန္ဒစန္ဒြမင်း၏ကျောက်စာတွင် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ဓလေ့ထုံးစံ အလှူအတန်းများ ပြုလုပ်ပုံ၊ စန္ဒြမင်းဆက်၏ မင်း၊ မိဖုရားနာမည်များ၊ မင်းဆက်အမည်များ၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ကုန်သွယ်ခဲ့ပုံများ စသည့်အကြောင်း အရာများ ရေးထိုးထားခဲ့ကြောင်းနှင့် ကျောက်စာသည် မူလက မြောက်ဦး မြို့နယ်နှင့် ကျောက်တော်မြို့နယ်ကြားရှိ ဝေသာလီရွာတွင်ရှိခဲ့ရာမှ ရခိုင်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်သော မင်းပါ(မင်းဗာ) ဘုရင်လက်ထက်တွင် ယင်းကျောက် စာကို ရှစ်သောင်းဘုရား (သျှစ်သောင်း ဘုရား) အနီးတက်လမ်းသို့ ပြောင်း ရွှေ့ထားပြီး ကျောက်စာရုံဖြင့် ယနေ့တိုင် တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ရခိုင် ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်၊ ကျောက်စာကျွမ်းကျင် ပညာရှင်ထံမှသိရသည်။
ဖောင်းပြင်မှ ဓမ္မစကူးလ် ကျောင်းဆရာမကို သတ်သည်ဟု ဆိုသူအား ဖမ်းမိ အဓမ္မကျင့်ရန် ကြံစည်ရင်း လက်?
တစ်ချောင်းငင် အရှည်နှင့် အတို သုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ကြယ်ပွင့်ပြေ??